FAHAFATESANA TSY NAMPOIZIN’NY MARO : Mitantara ny nahazo an’ i Taa –Tense ny reniny
Teo amin’ny faha- 36 taonany i Rajaonarivony Tsizaraina Nathalie Hortense na Taa-Tense izao nodimandry izao. 1er avril 2021
Teraka tao anatin’ny Fokontany Ambohibary – Fandriana izy, roa vavy izy ireo no zanak’i Rajaonarivony Dieu Donné sy Rasoanandrasana Marie Christine ka i Taa – Tense no vavimatoa. Lehibe sy nitombo tao Mahajanga i Taa-Tense ary tany no nanombohany niditra teo amin’ny sehatry ny mozika mandra-pahatonga azy ho kintan’ny mozika milamindamina teto Madagasikara.
“Nanomboka tamin’ny taona 1997 ka hatramin’izao izahay no mipetraka ao Mahajanga. Lehibe tany Avaratra izy satria izahay nipetraka tany Mahajanga ary ny mahatonga azy manao teny tavaratra dia ny vadiny avy any”, hoy ny reniny. Mandrak’ankehitriny anefa dia reharehan’I Fisakana ny fananana azy noho izy tsy mba nanadino ny toerana niaviany.Tany ho any amin’ny taona 2015 tany ho any no niroboka voalohany teo amin’ny sehatry ny mozika ny tovovavy. “Raha misy olona iray mba tena tia anao anaovy ny tsara mba tsy hanenenanao. Aza variana fahafinaretana mandalo fa manimba raha maro io, tiavo ilay nanaja anao….. fa fandalovana izao rehetra”, io no ampahany amin’ilay tonon-kira mitondra ny lohateny hoe “Tsy tiako intsony ianao”, hira izay tena nahafantaran’ny mpankafy an’I Taa - Tense.
Voafintina tao anatin’ny hafatry ny tononkira ny zava-nisy satria tena fandalovana tokoa, tao anatin’ny indray mi-pimaso dia dify tsy ho tazana intsony ilay tovovavy manga feo, izay nahay nampifanaraka ny hirany tamin’ny fihetseham-pony sy ny fihetsiny izay tena nampisandratra azy vetivety teo amin’ny sehatry ny mozika. “Kotsan-dranomaso ny tavako….. Toa tsy mino hoe izany no hiafaran’ny tantara”, ampahany amin’ireo tononkirany ihany koa izany izay toa manaporofo ny zava-nisy tamin’ny fahasalanany satria dia nitanondrika, ontsa, vaky fo izay naheno hoe lasa i Taa- Tense.
Maty tany anaty fiara mpitondra marary
Ny alahady maraina no niparitaka tao anatin’ny tambajotra serasera “facebook” fa nindaosin’ny fahafatesana teo am-piterahana i Taa-Tense. Nampahafantatra izany ihany koa ireo mpanakanto namany. Raha ny fitantarana noentin’ny reniny anefa dia ora vitsy taorian’ny niterahany izy vao namoy ny ainy rehefa tsy nahazaka intsony hirifirin’ny fanaintainana nahazo azy. Nomarihin’ny reniny fa olona salama, matanjaka ary tomady tsara foana i Taa-Tense hatramin’izay na nandritra ny fotoana nitondrany vohoka aza. Hatramin’ny fotoana efa hiterahany aza dia hita ho natanjaka hatrany izy. “Niainga tany Mahajanga tamin’ny talata aho mba hamonjy azy hiteraka. Izy tena tsy mba narary lava izany ary mbola tena natanjaka be foana”, hoy ny reniny manomboka mitantara ny zava-niseho.
Fahaverezan-drà be loatra taorian’ny fiterahana na ilay antsoina hoe « hémorragie » no nitarika ny fahafatesan’ I Taa – Tense. Nanao ny ala nenina rehetra tamin’ny fanavotana azy ny mpitsabo saingy tsy tana intsony ny ainy. “Teraka soa aman-tsara izy ny sabotsy tamin’ny 11 ora antoandro. Somary efa nisy fahaverezan-dra izy. Ilay menaky ny ainy kosa efa tafavoakany soa aman-tsara. Rehefa nojeren’ny rasazy indray izy dia hita fa mandeha ra be izy. Tsy vitan’ny tao amin’ny sampana vonjy taitran’ilay hopitaly (urgence) ilay nahazo azy dia nanapa-kevitra ny handidy azy ny mpitsabo. Avy eo nijanona ilay rà dia nampangalana efitrano amin’izay izahay ary tao amin’izay izy no nitaraina hoe “maharary, maharary” tokony ho tamin’ny 3 ora maraina teo. Avy eo izahay saika nafindra tamina toeram-pitsaboana (Clinique) iray hafa, ary tao anaty fiara mpitondra marary (ambulance) izy no tapitra ny ainy”, hoy ny reniny mitantara tao anatin’ny alahelo tanteraka.
Tsy miavona, tia tsikitsiky
Betsaka tamin’ireo namany sy ireo olona nifanerasera taminy no nilaza olona tsotra, tsy miavona ary tia hanihany I Taa –Tense. Hita porofo izany amin’ireo sariny niparitaka teny amin’ny tambajotra serasera. Fanehoan-kevitra noentin’ ireo mpakafy azy tao anatin’ny tambajotra serasera ny hoe, “anisan’ireo mpanankato tena nankafiziko satria tsy mba miavona”, “namana ary tena namana ary tena tia mihanihany”, hoy kosa ny hafa. Na ny reniny aza dia nanamafy fa io tsikiny, sy fahatsorany io no tena nampiavaka an’I Taa –Tense amin’izy roa vavy mpiray tampo.
“Ny tena nampiavaka azy dia izy sariaka be, tena tia mitsikitsiky foana izy. Rehefa misy ankizy fantany dia mitsiky foana izy”, hoy hatrany ny reniny. Misaona ny zava-kanto malagasy, mahatsiaro banga ireo mpanakanto namany satria lasa sahady ilay voninkazo vao namelana teo amin’ny sehatry ny mozika. Nahay niara-niasa tamina karazana mpanakanto maro izy fony fahavelony, anisan’izany ry Bakomanga izay tena nifankahazo tanteraka taminy. Mahatsiaro fahabangana ihany koa ny Minisiteran’ny serasera sy ny Kolontsaina. Araka izany, dia nasondrotra teo amin’ny laharam-boninahitry ny “Chevalier de l’ordre national” ity mpanakanto nindaosin’ny fahafatesana ity. Marihina fa salama tsara ilay zanany kely vao teraka izay nampitondrainy ny anarana hoe “Messia”, namela kamboty vavikely iray 13 taona ihany koa I Taa-Tense
Mampitandrina noho ireo salama misy Covid ny talen’ny Fahasalamana FIHENAN’NY MARARY AO MAHAJANGA (1807) 11 mai 2021 ALAKAMISY 6 MAY - ALAROBIA 12 MAY 20121 (738) 10 mai 2021 “Môtô halatra no atakalo rongony mahery vaika” FIDOROHANA TAFAHOATRA (50) 11 mai 2021 Mampisavoritaka ny amboletran’ i Raoul Rabekoto KITRA MALAGASY (47) 11 mai 2021 Tsy ampy 3 000m3 isan’andro ny rano tsinjarain’ny Jirama TANANAN’I MAHAJANGA (37) 11 mai 2021 Tsaboina sy toroana hevitra any an-trano ireo mararin’ny Covid – 19 « COUP DE POING » (36) 11 mai 2021